नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अब फेरी नेपाल बन्द रे ! केही आफुलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरु जसले सधैं भ्रमको खेती गरेर नेपालको यो हबिगत बनाए, कसको कुरा सुन्नु पास गर्ने को कि बिरोध गर्नेको ? आएछ अर्को भ्रमको बिज्ञप्ती !!
अब फेरी नेपाल बन्द रे ! केही आफुलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरु जसले सधैं भ्रमको खेती गरेर नेपालको यो हबिगत बनाए, कसको कुरा सुन्नु पास गर्ने को कि बिरोध गर्नेको ? आएछ अर्को भ्रमको बिज्ञप्ती !!
र, एउटा यो कार्टुन पनि घोरिएर हेर्नुस् त !